KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 2015
ကရင်လူမျိုးတို့၏ရိုးရာအစားအစာဖြင့်မိတ်စုံစားပွဲတရပ်ကို ယနေ့ဂျပန်တိုကျိုတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည် မအားမလပ်ကြားမှလာရောက်သောကရင်လူမျိုးကိုချစ်၍အချိန်ပေးရောက်လာသောကရင်မောင်နှမများ ဂျပန်မိတ်ဆွေများ ကရင်အရေးကိုစိတ်ပါ၍ကူညီပေးနေသောဂျပန်လူမျိုးများ လာရောက်သောသူများ မနက်မစခင်ထဲကမနားတန်းမပင်ပန်းပဲချက်ပြုတ်ရေးသာမကသိမ်းဆေးရေးကိုပါကူညီလုပ်ကိုင်ပေးသောသူများအားလုံးကိုကျေုးဇူးတင်မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 11:06 PM No comments:
အချိန် ညနေ ၄း၃၀မှ ည ၇း၀၀အထိ
နေရာ SOGO KUMIN CENTER
TOEI SHINJUKU လိုင်းအပေါ်တည့်တည့်
ဘူတာ NISHI OJIMA STATION
( TOEI SHINJUKU လိုင်း
KUDANSHITA ဘူတာမှပြောင်းစီး ၉ဘူတာမြောက်
လိပ်စာ TOKYO 🏣136-0072
ဆက်သွယ်ရန် စောကျော်ထင်ထူး. 080 3121 3615
စညီညီလွင် 080 6812 7668
စောကစ်စင်ဂျာ. 080 3570 6470
連絡先 saw bahlathein.. 080 4246 637
Saw kyawhtinhtoo.. 080 3121 3615
Sa nyinyilwin.. 080 6812 7668
Naw hlaownmarwin 080 5501 6529
Saw kissinger 080 3570 6470
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 3:48 PM No comments:
ဒီလိုနေ့မျိုးကိုမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးအန်ကယ် ခရစ်တော်၌ဘုန်းတော်ဝင်စားပြီလို့သိလိုက်ရပါတယ် ကရင်အမျိုးသားအားလုံးအတွက် တန်းတူအခွင့်ရေးရရန်တိုက်ပွဲဝင်ချိန်မှာရှေ့မှီနောက်မှီကြယ်တပွင့်ကြွေပြန်ပြီ နှမျောသတတဖြစ်မိပါတယ်အန်အယ် KNL-JAPANမှလည်းယူဆုံးမရဝမ်းနည်းမိပါတယ်
မတ် ၁၈ရက်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်။ စောသိန်းမြင့်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း၌ မတ်လ ၁၆ရက်နေ့က စတင်သည့် ဒုက္ခသည်စာရင်း စစ်ဆေးမှုတွင် တစ်ရက်အတွင်း လူဦးရေ ၃,၀၀၀ ကျော်နှုန်း သတ်မှတ်စစ်ဆေးနေသည်ဟု စခန်းတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် စောစိုးထိုက်က ယနေ့ ပြောသည်။
သူက “ ပထမ တစ်ရက်က စခန်းတာဝန်ရှိသူနဲ့ စခန်းထဲက NGOs အလုပ်ကို လုပ်တဲ့လူ ၇၀၀ ကျော်ကို အရင်စစ်လိုက်တယ်။ အမှန်က တစ်ရက်ကို ၃,၆၀၀ ဦးနှုန်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Zone C1 (A)ပြီးသွားပြီ။ ဒီနေ့ Zone C1 (B) ပြီးမယ်။ စခန်းတစ်ခုလုံးကို သတ်မှတ်ထားတာက ဧပြီ ၆ ရက်မှာအပြီးစစ်မယ် ” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
၎င်းလူဦးရေ စစ်ဆေးမှုတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) အသိ အမှတ်ပြု လက်မှတ်ရှိပြီး လူကိုယ်တိုင် မလာရောက်နိုင်သူများကို နောက်မှ လာပြရန် အခွင့်အရေး ပေးထားသော်လည်း ရိက္ခာလက်မှတ် မတင်ပြနိုင်သူနှင့် အိမ်နံပါတ်ရှုပ်ထွေးသူများကို သီးခြားစစ်ဆေးလျှက် ရှိသည်ဟု စောစိုးထိုက်က ဆက်ပြောသည်။
UNHCR ဒုက္ခသည်များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် The Border Consortium (TBC)နှင့် ထိုင်းပြည်ထဲရေးဋ္ဌာန (MOI)တို့ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းဒုက္ခဦးရေစစ်ဆေးမှုတွင် အိမ်ထောင်စု စာရင်းအရင်တင်ပြခိုင်ပြီး အိမ်နံပါတ်နှင့် အိမ်ထောင်ဦးစီးကို နာမည်ခေါ်ဆိုပြီးနောက် တစ်ဦးချင်း လက် ဗွေနှိပ်ခြင်း၊ မျက်လုံးကို စကင်ဖတ်ခြင်း တို့ကို တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်ဟု အစစ်ဆေးခံပြီး သူများထံမှ သိရသည်။
မယ်လစခန်း၏ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ တာဒီ့ပါးက “ အိမ်ထောင်စုစာရင်း၊ ရိက္ခာလက်မှတ်နဲ့ ကလေးမွေးစာရင်း အကုန်ယူသွားရပါတယ်။ လက်ရှစ်ချောင်းရဲ့ လက်ဗွေကို အရင်ယူတယ်။ ပြီးရင် လက်မ ၂ ချောင်းစလုံး လက်ဗွေယူတယ်။ မျက်လုံးကို စစ်တယ်။ မမှန်မကန် လုပ်တဲ့သူဆို မလွယ်ဘူး ” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တစ်လျှောက် မြန်မာဒုက္ခသည်စခန်း (၉)ခုရှိ ဒုက္ခသည်ဦးရေ အတိအကျ သိရှိရန် ရည်ရွယ်ကာ ဇန်န၀ါရီလကတည်းက မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်ရှိ ကရင်နီအမှတ်(၁)၊ အမှတ်(၂)၊ မယ်ရာမိုနှင့် မယ်လအူး ဒုက္ခသည်စခန်းများကို လူဦးရေစာရင်း စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် တာ့ခရိုင်ရှိ ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၄ သောင်းကျော် နေထိုင်သော မယ်လစခန်းကို မတ်လ ၁၆ရက်နေ့က စတင်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် လာမည့် ဧပြီလ ဆန်းပိုင်းမှ ဧပြီလကုန်ပိုင်းအထိ တာ့ခရိုင်ရှိ အုန်းဖျန်၊ နို့ဖို့၊ လာဘူရီ ခရိုင်ရှိ ထမ့်ဟင်နှင့် စန်ခလာ့ဘူရီခရိုင်ရှိ ဘန့်ဒုံယမ်း ဒုက္ခစခန်းများကို လူဦးရေ စာရင်းစစ်ဆေးမှု ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:30 AM No comments:
-ပဒိုမန်းရှာလားဖန်းအား ၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ ဇူ
လိုင် လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း ၊
ပန်းတ နော်မြို့နယ်၊ တောကျောင်းကျေး
ရွာနေ မန်းဘ သော်နှင့် ဂါ့နမ့်တင် တို့မှ
မွေးဖွာခဲ့သည်။ မွေချင်း ၃ ယောက်အ
နက်ဒုတိယ မြောက်ဖြစ်သည်။ အမည်
-၁၉၅၉-၆၀ ခုနှစ်ကပန်းတ နော်မြို့နယ်
တွင် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းပညာသင်
ယူခဲ့ပြီး ပန်းတ နော်အထက်တန်း
ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
၌ပညာသင်ကြားရင်း 7th July အ ရေး
အခင်းတွင် ပါဝင် ခဲ့သည်။ ၁၉၆၆ တွင်
-၁၉၆၃ မှစ၍ KNU နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး
၁၉၆၆ အထိ KNU - UG တာဝန်များ
-၁၉၆၇ တွင် ပဲခူးရိုးမ တော်လှန်ရေး
နယ်မြေသို့ရောက် ရှိပြီး KNU တာဝန်
-KNU တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေ၊ ညောင်
လေးပင် ခရိုင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုး
အဖြစ် ၁၉၇၅ မှ ၁၉၈၄အထိဆောင်
-၁၉၆၇ တွင် KNU တော်လှန်ရေးရဲ မေ
နန့်ကျင်ရွှေနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ စော
စေးစေး၊ နန့်ဘွားဘွားဖန်း၊ နန့်ဇိုယာဖန်း
စလုံ့ဖန်း သားသမီး ၄ ဦးထွန်းကားခဲ့
-၁၉၈၄ တွင် အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီတပ်
ပေါင်းစု NDF ဗဟိုသဘာပတိအဖွဲ့ဝင် ၊
KNPP, KNU, ALP, PPLO, PSLP, KIO,
ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ပါဝင် ခဲ့သည်။
-၁၉၈၄ KNU ဗဟိုကော်မတီဝင်ဖြစ်ပြီး
နောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘိုမြ၏ PSO
-၈၈ အ ရေးတော်ပုံမှတော်လှန်ရေးနယ်
-၁၉၈၉ တွင် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရက်တစ်
မဟာမတ်အဖွဲ့ချုပ် DAB ဗဟိုအလုပ်အ
မှုဆောင် ကော်မတီဝင် အဖြစ်ဆောင်
-၁၉၉၂တွင် ပြည်ထောင် စုအမျိုးသား
ကောင် စီ NCUB တွင် တွဲဖက်အ ထွေ
ထွေအတွင်းရေးမှုး ၃ အဖြစ် ကျဆုံးချိန်
-၁၉၉၅ -၁၁ကြိမ်မြောက် KNU Congr-
ess တွင် တွဲဖက်အ ထွေထွေအတွင်း
ရေးမှုး ၂ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
-နဝတ နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် မော်
တတိယ နှင့် စတုတ္ထဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒုအဖွဲ့ခေါင်း အဖြစ်ပါဝင် ခဲ့သည်။
-၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် 12nd Congress တွင်
KNU အ ထွေထွေအတွင်းရေးမှုး၊ ၂၀၀၄
13rd Congress တွင် KNU အ ထွေထွေ
-၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့၊
ည နေ ၄ နာရီ ၄၆ မိနစ်တွင် ကျဆုံး
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:17 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 5:25 PM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:46 PM No comments:
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း၌ တစ်ရက် လူ ၃,၀၀၀ ဦးကျော်နှုန်း စစ...